IBhayibhile—Incwadi Ekhethekileyo, Yeyona Isasazwe Ngaphezu Kwazo Zonke Iincwadi Ezakha Zakho
“Kwimbali yonke yoluntu, iBhayibhile yeyona ncwadi isasazwe ngokubanzi.”—IThe World Book Encyclopedia.
KWIMINYAKA engaphezu kwama-550 eyadlulayo, uJohannes Gutenberg waseJamani waba ngumntu wokuqala ukushicilela ngomatshini. Incwadi enkulu yokuqala awayishicilelayo yiBhayibhile. * Ukususela ngoko, kuye kwashicilelwa izigidi ngezigidi zeencwadi ezithetha ngezinto ezahlukahlukeneyo. Noko ke, eyona ncwadi ibalaseleyo kuzo zonke yiBhayibhile.
Imibhalo yeBhayibhile (epheleleyo okanye inxalenye yayo) eye yashicilelwa, ithelekelelwa kwisi-4,7 samawaka ezigidi. Elo nani liliphinda izihlandlo ezingaphezu kwesihlanu inani lencwadi elandela iBhayibhile ngokusasazwa ngokubanzi, ebizwa ngokuba yiQuotations From Chairman Mao.
Komnye unyaka kutshanje, kuye kwasasazwa imibhalo yeBhayibhile epheleleyo okanye inxalenye yayo, engaphezu kwama-50 ezigidi. Iphephancwadi iThe New Yorker lithi: “IBhayibhile yeyona ncwadi ithengwa kakhulu minyaka le.”
IBhayibhile epheleleyo okanye inxalenye yayo iye yaguqulelwa kwiilwimi ezingaphezu kwama-2 400. Ubuncinane, inxalenye yeBhayibhile iyafumaneka ngeelwimi ezingaphezu kwama-90 ekhulwini.
Ababhali beBhayibhile abamalunga nesiqingatha bagqiba ukubhala iincwadi zabo engekazalwa uConfucius indoda yaseTshayina eyayisisilumko noSiddhārtha Gautama, owaqalisa ubuBhuda.
IBhayibhile inempembelelo enkulu kubugcisa bokuzoba, kuquka eyona mizobo yodumo ehlabathini lonke, inempembelelo emculweni nasekubhalweni kweencwadi ngokubanzi.
Abanye oorhulumente baye bamisela imithetho echasene nabantu abaneBhayibhile, iye yatshiswa ngabo bachasene nonqulo yaye iye yahlaselwa ngabagxeki kodwa zonke ezo nzame zitsho phantsi. Ayikho enye incwadi eye yachaswa ngaloo ndlela yaza yasinda ekubhangisweni.
Ezi zibakala zikhankanywe ngasentla zihlab’ umxhelo, akunjalo? Kakade ke, iinkcukacha eziphathelele umkhamo wokusasazwa kweBhayibhile, akuphela kobungqina bokuba iyincwadi enokuthenjwa. Kumanqaku alandelayo, siza kuhlolisisa izizathu ezihlanu ezibangela izigidi zabantu zikholelwe eBhayibhileni.
^ isiqe. 3 IBhayibhile eyashicilelwa ngulo kaGutenberg, yayiyinguqulelo yesiLatin yaye yagqitywa malunga nowe-1455.